२४ अषाढ २०७७
काठमाडौँ । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाइरहेका बेला नायक भुवन केसीमाथि क्यानडा बस्दै आएकी एक महिलाले आफूले पनि अभिनेता केसीबाट अप्ठ्यारो अनुभव गरेको बताएकी छन्। फेसबुकमा अभिनेता केसीसँगको च्याटको स्क्रिन भिडिओ राख्दै स्वेता रेग्मी नामकी महिलाले फेसबुकमा भुवनको बोल्ने शैलीबाट असहज महशुस भएको बताएकी छन्। रेग्मीले सार्वजनिक गरेको च्याटको स्क्रिन भिडिओमा उनले आफूलाई आपत्तिजनक लागेका भुवनका भनाइहरूमा रातो घेरा लगाएकी छन्।…विस्तृत समाचार »
बलिउडकर्मीलाई कंगनाको प्रश्न–सुशान्तको आत्महत्या हो या योजनाबद्ध हत्या ?
२ अषाढ २०७७
बलिउड नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको घटनासँगै बलिउडमा फेरि एकपटक ‘परिवारवाद’को विषयले चर्चा पाएको छ। चलचित्र क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आएका कलाकारलाई बलिउडले महत्व नै नदिने भएकाले धेरै कलाकार डिप्रेसनमा जाने र कतिपयले आत्महत्याको बाटो अपनाउने गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । नायिका कंगना रनावतले यो विषयमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्–‘सुशान्तले दर्शकलाई आफ्नो चलचित्र हेरिदिन आग्रह गरिरहेका थिए । उनलाई चलचित्र…विस्तृत समाचार »
नेपाली युवक दिवेश अमेरिकन आइडलको टप टेनमा
२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अमेरिकाको प्रख्यात् गायन रियालिटी सो अमेरिकन आइडलको उत्कृष्ट १० (टप टेन) मा प्रवेश गरेका छन्। जोन डेनभरको चर्चित गीत ‘कन्ट्री रोड’ गाउँदै उनी ‘आर्थर गन’ का नामले चिनिएका दिवेश टप टेनमा उक्लिन सफल भएका हुन्। अमेरिकन आइडलको लाइभ सोमा उत्कृष्ट १० मा पुग्ने उनी पहिलो नेपाली बनेका छन्। दिवेशले फेसबुकमार्फत आफू अमेरिकन आइडलको टप टेनमा पुगेको जानकारी…विस्तृत समाचार »
१८ वैशाख, काठमाडौं । भारतका प्रख्यात् कलाकार एवं अभिनेता ऋषि कपुरको निधन भएको छ। उपचारका क्रममा ६७ वर्षे कपुरको बिहीबार निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बुधबार मुम्बईस्थित सर एचएन रिलायन्स अस्पताल भर्ना भएका कपुरको बिहीबार निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अभिनेता अमिताभ बच्चनले पनि ट्विटमार्फत ऋषि कपुरको निधन भएको जानकारी दिँदै दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्विट गरेका छन्, ‘उनी गए...ऋषि कपुर गए...अहिले…विस्तृत समाचार »
१७ वैशाख, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता इरफान खानको निधन भएको छ। ५४ वर्षीय खानको बुधबार बिहान मुम्बईको कोकिला वेन धिरूभाइ अम्बानी अस्पतालमा निधन भएको हो। उनी दुई वर्षदेखि क्यान्सरको उपचार गरिरहेका थिए। खानलाई न्युरोएन्डोक्राइन ट्युमर भएको थियो। उनको निधनको समाचार निर्देशक सुजित सरकारले ट्वीटबाट दिएका हुन्। जयपुर राजस्थानमा सन् १९६६ मा जन्मिएका खान थिएटरबाट सिनेमाबाट आएका थिए। उनको अन्तिम सिनेमा सात महिनाअघि रिलिज भएको अंग्रेजी…विस्तृत समाचार »
शाहरुखले स्वास्थकर्मीलाई दिए २५ हजार हजार पिपिई
२ वैशाख, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानले सोमबार स्वास्थ्यकर्मीका लागि २५ हजार थान पिपिई किट्स सहयोग गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमम इन्डीयन एक्सप्रेसमा उल्लेख भएअनुसार शाहरुखले फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने महाराष्ट्रका स्वास्थकर्मीको मनोबल बढाउनुका साथै देशको विषम परिस्थितिलाई बुझेर यस्तो उत्कृष्ट काम गरेका हुन्। शाहरुखको उक्त सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो राहत भएको भन्दै महारास्ट्रका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेश तोपेले ट्विटरमार्फत् धन्यवाद ज्ञापन गरेका…विस्तृत समाचार »
२३ हजार मजदुरलाई सलमानले पठाए ३–३ हजार
२७ चैत्र २०७६
२७ चैत, काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भारत लकडाउनमा छ । लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा बलिउड चलचित्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको दैनिक जीवन समस्यामा छ । यसैले, ती मजदुरहरुको सहयोगका लागि बलिउडका कलाकार अगाडि आएका छन् । यसमा नायक सलमान खानको नाम पनि सबैभन्दा अगाडि आउँछ । अभिनेता सलमान खानले बलिउड चलचित्रमा काम गर्ने २३ हजार मजदुरलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।…विस्तृत समाचार »
१६ लाखको लेहेंगाः संस्कृतिमाथी भद्दा मजाग, आचललाई कारबाही हुने कि नहुने ?
सन्दिप पौडेल विश्वभर नै कलाकारलाई सम्मान गरिन्छ। खासगरी कलाकारलाई राष्ट्रका गहना भनी सम्मान व्यक्त गरिन्छ । गहना यस्तो आभूषण हो, जसले शोभा बढाउने काम गर्छ। त्यसैले विश्वमा गहना बनाउने धातु सबैभन्दा महंगा छन् । कलाकारलाई समाजको ऐनाको रुपमा पनि परिभाषित गरिन्छ । अर्थात कलाकार जसरी प्रस्तुत हुन्छन् समाज पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्छ । अहिले नेपाली बजारमा एक जना नायिका आँचल शर्माको खुबै चर्चा चुलिएको…विस्तृत समाचार »